FAQs - Anke fonosana Company Limited
1: Iza no ANKE fonosana Ltd?
Eliquid matihanina isika fonosana mpanamboatra ao Shina. Isika hita ao Guangzhou. Isika izao eo amin'ny tsena fonosana 15 taona mahery, ary vola bebe kokoa eo amin'ny eliquid fonosana. Afaka manome tavoahangy, marika, boaty, vape fatorana, kitapo sy ny eliquid fonosana.
Mifidiana ANKE, misafidy asa fanompoana tsara.
2: Nahoana no hifidy ANKE?
Satria isika no tena matihanina. Fantatsika izay manan-danja ho an'ny mpanjifa, ary isika no vonona ny hanome vidiny tsara kokoa, haingana fanaterana sy seasonable rehefa avy-fanompoana.
Isika no tsy te-ho ny mpamatsy, tiantsika ny ho fonosana mpiara-miasa, dia hanao tsara indrindra mba hanampy anao eo amin'ny fonosana.
3: Ahoana no mifehy ny tavoahangy toetra?
Manana ny Filaharam QC dept manao ny fitsapana in-3 alohan'ny fanaovana ampahany production.And koa isika hifidy sy handinika ny siny hoditra toetra tsirairay alohan'ny fonosana. Afaka ihany koa ho EO hiteraka toy ny mpanjifa fepetra manokana.
4: Ahoana no misafidy ny tavoahangy te?
Amin'izao tranonkala, dia afaka mahita maro karazana fivarotana mafana. Azonao atao ny manamarin ny tsipiriany, ary handefa ny fanontaniana ho antsika. Raha toa ianao ka liana amin'ny karazana sasany fa tsy mampiseho ny tranonkala, azafady isoratana ny antsipirihany tinady, dia niverina anao ny vahaolana.
5: no Hataoko mahazo santionany?
Eny Mazava ho azy. Afaka mandefa anareo santionany Ary izahay dia vonona ny hanao izany. Ny santionany dia hanampy anao hanana Hatoky tena kokoa eo amin'ny tsara sy ny asa fanompoana. Ary ny santionany dia tsy ny olana rehetra.
Santionany tavoahangy dia maimaim-poana, andefaso olona fotsiny isika mba hahazo antoka ny santionany 'fandefasana.
6: Inona no MOQ?
Raha ny mahazatra dia ny sasany tavoahangy-boay. Amin'izay, ny MOQ dia iray baoritra feno. Raha tianao manokana, na karazana tavoahangy te namboarina entana sasany, dia niverina MOQ Info hamitaka anao.
7: Inona no mitarika ny fotoana?
, Ohatra, dia mitandrina ho 10ml famokarana, Raha toa ka mila ny habetsahana latsaka 100k vondrona, rehefa avy nandinika sy fonosana isika, dia afaka manao fanaterana anatin'ny 5 andro.
Trarantitra ianao, aoka aho mahalala ny antsipirihany tinady, dia niverina mitarika anao marina info.
8: Ahoana no an-tsambo ny fananany?
Manana sampan-draharahan'ny fandefasana matihanina isika, dia afaka manampy anao ho any an-tsambo ny fananana rehetra manerana izao tontolo izao. Ary ny sampan-draharahan'ny fandefasana Hanampy anao mitandrina hanaraka ny fandefasana.
Base eo amin'ny fotoana fandaharam-potoananao, azontsika atao mazava isan-trano, fandefasana entana amin'ny alalan'ny rivotra, fandefasana entana amin'ny ranomasina ho any seranana, fandefasana entana amin'ny ranomasina ho any varavarana sy ny fandefasana ny fiaran-dalamby.
Raha manana mpandraharaha fandefasana ianao, dia afaka aoka izy ireo hitondra ny entany avy amin'ny trano fanatobiana entana izay any Guangzhou. Na afaka hampandehaniko hankatỳ aminareo mpandraharaha, dia tsy misy olana ihany koa.
9: Inona no tokony hataoko izao?
Contact ANKE, dia manome ny asa fanompoana sy ny tsara indrindra ho anao tavoahangy.